Beelo Dhaliilsan Koonfur Galbeed
Shariif Xasan ayaa ah madaxweynaha Koonfur Galbeed
Qaar ka mid ah salaadiinta iyo aqoonyahanka beelaha dega Bay iyo Bakool oo saluugsan habka loo qeybsaday wasiirada maamulkaas ku jira iyo ergooyinka haatan soo xulaya baarlamanka ayaa ku shiray Nairobi.
Iyadoo haatan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaalia ay u fadhiyaan soo xulista xubnaha baarlamanka uu maamulkaas yeelanayo, ayaa waxaa soo baxaya cabashooyin laga muujinayo hanaanka ay wax u socdaan.
Xubnahan ayaa ka sheegay inaysan caddaalad ahayn habka wax loo qeybinayo, waxayna ka dalbadeen madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan inuu wax ka qabto arrintan.
Shir ka dhacay magalada Nairobi ee arintan la xiriira waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyeheenna Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo.
Dhinaca kale, afhayeenka Odayaasha Dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa diiday eedeymaha iyo cabashooyinka ka dhanka ah dhismaha mamaulka Koonfur Galbeed, wuxuuna u warramay weriyaheena Muqtaar Catoosh.
Dabeylo ku Dhuftay Ceelasha-Biyaha
Austria: Meydadka 71 Muhaajiriin oo la Helay
Suuqyada Dhaqaalaha oo Dib Usoo Kabanaya